Chautari Daily » काठमाडौंमै धुमधामले विश्वकर्मा र राणाबीच मागी विवाह ,आमाबुबाले गरे गोडा धोएरै कन्यादान !
काठमाडौंमै धुमधामले विश्वकर्मा र राणाबीच मागी विवाह ,आमाबुबाले गरे गोडा धोएरै कन्यादान !
पछिल्लो समय अन्तरजातिय विवाह अलि बाक्लै हुन थालेको छ । हालै काठमाडौंको बानेश्वर ब्याँकेटमा भइरहेको एक अन्तरजातिय विवाहले पनि सबैको ध्यान तानेको छ । बाजागाजा सहित हिन्दु धर्म परम्परा अनुसार राणा परिवारको छोरी र विश्वकर्माको छोराबीच विवाह भइरहेको थियो ।
हिन्दु धर्म परम्परा अनुसार जग्य बनाइएको थियो भने , परिसरमा नौमती वाजा वजिरहेको थियो । जग्गेको छेऊमा तामाको खड्कुँलामाथि दुल्हादुलहीको खुट्टा राखेर माइती पक्षले गोडाको जल खाँदै थिए ।
कुनै जमानामा दलितले छोएको पानी पनि नखाने कुरितीलाई ठाडो चुनौती दिँदै राणा परिवारले विश्वकर्माका छोराको गोडाको पानी पिएर छोरी अन्माइरहेका थिए । समाज परिवर्तनका लागि अन्तरजातिय विवाह गरेर उदाहरण राखेको यो परिवारले गोडाकै जल किन खाएको होला ? परिसरमा केहीले यस्तो पनि भनिरहेका थिए, आजकालको जमानामा टिका लाइदिए भइहाल्यो नि । जलखान जरुरी छैन उनीहरुको तर्क थियो ।
तर दुलहीका मामाले जवाफ फर्काए छोरी लक्ष्मी हो भने ज्वाईं नारायण हो, त्यसैले पानी खानु त महाधर्म हो । बेहुली पक्षकाहरुले धमाधम छोरी ज्वाईको गोडा धुन थालेपछि आएको यस्तो श्वमा दुलहीकी आमाले पनि जवाफ दिइन्, हाम्री छोरी जे जात हो, ज्वाई पनि त्यही जात । अव छोरीको पानी खाँदा ज्वाईको किन नखाने ? यो त झन् ठूलो पुण्य पो त ।
यो महान विचार सहित गैरदलित परिवारले दलित युवकलाई राजीखुशी आफ्नी छोरी कन्यादान गरी विवाह गरिदिइ जातीय विवेद र छुवाछूतको सामाजिक वन्देज तोड्ने महान कार्य गरेका छन् । हाम्रो समाजमा वर्षौदेखि वाधक बन्दै आएको विभेदलाई हटाउनका लागि ललितपुरका राणा परिवारले साहसिक उदाहरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।
ललितपुर गोदावरीका राजवहादुर राणा र भूमिका राणाले आफ्नी छोरी सुम्निमा राणालाई गोडा धोएरै कन्यादान गरी अभिराज लकान्द्री विश्वकर्मासंग विवाह गरिदिएका हुन् । सुम्निमा र अभिराज अमेरिकाको अलग–अलग शहरमा विगत चार–पाँच वर्षदेखि नै काम गर्दै आएका छन् । उनीहरुवीच केही समय अगाडिदेखिको प्रेम थियो,
लामो समय प्रेममा रहेका यि जोडीले आमाबुवाको अनुमतिमा आफ्नो लगनगाँठो कसेका हुन् । केटा पक्षवाट छोरी माग्न राणाको घरमा गएपछि कुनै नाइनास्तीबीना विवाह तय भएको थियो ।
दुवैपक्षका नातागोता, आफन्त इष्टमित्र भेला भई दुवैलाई जग्गेमा राखी विवाह गरिदिएका हुन् । दुलहा विश्वकर्मा समाजको वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामप्रसाद लकान्द्रीका छोरा हुन् । उनी अमेरिकामा बसेर मास्टर गर्दैछन् भने सुम्निमा पनि अमेरिकामा बसेर आइटी इन्जिनियर गरी काम गरिरहेकी छन् ।
उनी सेन्ट जेभिएर स्कुलकी फष्ट विद्याथी थिईन् । दुवै वीच भएको मगनी विवाहले समाजमा व्याप्त रहेको जातपात व्यवस्था केवल जातिवादी आडम्वर र रुढीवादी सोच रहेकोले प्रमाणित गर्दै यस्तो अन्तरजातीय विवाहले सवै जातिवीचमा भाइचारा, एकता र सहिष्णुता कायम गर्न उदाहरण दिएको छ ।
तस्बिर दलित अनलाईनवाट
प्रकाशित मिति ४ माघ २०७६, शनिबार १८:२७
गायक राजु परियारको देउसिभैलो गीत यस्तो बन्यो (भिडियो हेर्नुहोस् )
प्रेमिका भेट्न जाँदा कार दुर्घटनामा परेपछि…
जीप दुर्घटनामा दुईको मृत्यु, सत्र घाइते, तीनकाे अबस्था गम्भीर
दशैंको मुखैमा गायिका टिका सानुको रुवाबासी चलेपछि.(भिडियो हेरौ).
दशैँको मुखमा ३ करोड नेपालीलाई रुवाउने यो भिडियो
वैवाहिक बन्धनमा बाधिए इन्द्रेणीका छत्र शाही र काजल जोशी
मलेसिया सरकारले कामदारको तलब वृद्धि गर्ने..! हेर्नुहोस् कति बढ्छ
बुद्ध एयरका पाइलट शेर्पालाई विमान चलाउनमा रोक
एउटा अधुरो प्रेमकथाः साउदीमा रहेका प्रदीपलाई भेट्दै नभेटी संसार छाडेर गइन् लक्ष्मी
च्याम्पियन सिजन २ को उपाधि भरतमणिलाई